MAPAR sy TIM : Loza mihoatra ny Pesta -
AccueilRaharaham-pirenenaMAPAR sy TIM : Loza mihoatra ny Pesta
05/05/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Ao anatin’ny telo volana fahatelo farany mialohan’ny hiatrehana ireo karazana fanadinana ny mpianatra ankehitriny. CEPE, BEPC ary BACC ho an’ny ambaratonga voalohany sy faharoa. Miaina ao anaty tebiteby sy horohoro tanteraka anefa ny mpianatra sy ny ray aman-drenin’ny mpianatra noho ny ataon’ireo andian’olona avy amin’ny MAPAR sy TIM, manakorontana manerana ireo sekolim-panjakana eto an-drenivohitra.
Hiverina hanao jery todika kely ny taona 2017 isika nandritra ny fotoana nielezan’ny valanaretina Pesta. Nandray fanapahan-kevitra nampiato ny fandehanana an-tsekoly ny fitondram-panjakana ho fiarovana ny ain’ny mpianatra manoloana ny aretina Pesta. Fanenjehana mahery vaika no azon’ny fanjakana avy tamin’ny mpanohitra sy ny hainoamanjerin’ny mpanohitra tamin’izany fotoana, nanameloka ilay fanapahan-kevitra nampiato ny fampianarana nandritra ny fe-potoana voafaritra mazava tsara. Ho fiarovana ny ain’ny mpianatra anefa no anton’izany fanapahan-kevitra izany.
Ankehitriny, ireo izay nanameloka sy nanenjika ny fanapahan-kevitry ny mpitondra fanjakana nampiato ny fampianarana nandritra ireny fotoana nisian’ny Pesta ireny no mihoby ny fanakorontanana sy ny fitaomana ny mpianatra tsy hianatra fa hamonjy ny kianjan’ny 13 Mey, hanome tanana ny MAPAR sy ny TIM amin’izao fanonganam-panjakana kotrehin’izy ireo izao. Tsy ny fianaran’ny mpianatra ihany no voatohintohina amin’izany fa ny ain’ireo mpianatra mihitsy no tandindomin-doza. Iaraha-mahalala fa maro ny loza mety hitranga mandritra ireny hetsika an-dalambe ireny, ary hialan’ny “assurances” raha sendra tra-doza satria any amin’ny faritra ivelan’ny sekoly.
Iza amin’ireo solombavambahoaka MAPAR sy TIM ireo àry no vonona hijoro hiantoka ireo mpianatra notarihan’izy ireo nidina an-dalambe ireo? Mazava ho azy fa tsy misy, ary ny zanak’izy ireo tsy hataony sorona eny an-dalambe eny izany velively! Izay no ilazana hoe loza lavitra mihoatra ny aretina Pesta ireto MAPAR sy TIM ireto, tandindomin-doza tanteraka ny mpianatra sy ny zana-bahoaka isaka ny mivoaka ny trano fonenany ho any an-tsekoly. Ny ho avin’ny mpianatra sy ny tanora malagasy mihitsy no ho rava.
Nankasitraka ary manohana hatrany. Tsy nihambahamba mihitsy ny filoham-pirenena Frantsay, François Hollande, tamin’ny fanambarana nataony, fa manohana ary eo anila sy akaikin’i Madagasikara hatrany i Frantsa. Hatramin’ny nahazoan’i Madagasikara ny fahaleovantena, hoy ity filoham-pirenena frantsay ...Tohiny